Nehemaya 5 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
5 Otú ọ dị, ndị anyị na ndị nwunye ha tiri mkpu ákwá dị ukwuu+ n’ihi ihe ụmụnne ha ndị Juu mere ha.+ 2 E nwekwara ndị nọ na-asị: “Anyị na-enye ụmụ anyị ndị ikom na ụmụ anyị ndị inyom dị ka ihe ibé ka anyị nweta ọka* rie wee dịrị ndụ.”+ 3 E nwekwara ndị nọ na-asị: “Anyị na-enye ala anyị na ubi vaịn anyị na ụlọ anyị dị ka ihe ibé+ ka anyị wee nweta ọka n’oge ụkọ nri.” 4 E nwekwara ndị nọ na-asị: “Anyị ejiriwo ala anyị na ubi vaịn+ anyị gbaziri ego iji tụọ ụtụ eze.+ 5 Ugbu a, anyị na ụmụnne anyị+ bụ otu anụ ahụ́; ụmụ anyị ndị ikom na ụmụ ha ndị ikom bụ otu, ma, lee, anyị na-eme ụmụ anyị ndị ikom na ụmụ anyị ndị inyom ka ha bụrụ ndị ohu,+ e nwekwara ụfọdụ n’ime ụmụ anyị ndị inyom e meworo ndị ohu; anyị enwekwaghị ike, ebe ọ bụ na ala anyị na ubi vaịn anyị bụzi nke ndị ọzọ.” 6 Ozugbo m nụrụ mkpu ákwá ha na ihe ndị a ha kwuru, iwe were m nke ukwuu. 7 M wee tụlee ya n’obi m ma malite ịkatọ+ ndị a ma ama na ndị osote onye na-achị achị, m wee sị ha: “Ọmụrụ+ nwa ka unu na-anara, onye nke ọ bụla n’aka nwanne ya.” M mekwara ndokwa ka e nwee nnukwu nzukọ n’ihi ha.+ 8 M wee sị ha: “Anyị onwe anyị agbapụtawo+ ụmụnne anyị ndị Juu bụ́ ndị e resịrị ndị mba ọzọ, ruo n’ókè ike anyị hà; n’otu mgbe ahụkwa, ùnu ga-ere ụmụnne unu,+ à ga-eresị anyị ha?” O nyeghị ha ọnụ okwu, ha amaghịkwa ihe ha ga-ekwu.+ 9 M wee gaa n’ihu ịsị: “Ihe unu na-eme adịghị mma.+ Ọ́ bụghị n’egwu+ Chineke anyị+ ka unu kwesịrị ije ije n’ihi nkọcha nke ndị mba ọzọ, bụ́ ndị iro anyị,+ na-akọcha anyị?+ 10 Mụ onwe m na ụmụnne m na ndị na-ejere m ozi na-agbazinyekwa ha ego na ọka. Biko, ka anyị kwụsị ịgbazinye ego a ga-anata ọmụrụ nwa.+ 11 Biko, nyeghachinụ ha taa ala ha,+ ubi vaịn ha, ubi oliv ha na ụlọ ha, na otu ụzọ n’ụzọ otu narị nke ego na ọka, mmanya ọhụrụ na mmanụ unu na-anara ha dị ka ọmụrụ nwa.” 12 Ha wee sị: “Anyị ga-enyeghachi ha ihe niile,+ anyị agaghị asị ha nye anyị ihe ọ bụla.+ Anyị ga-eme kpọmkwem dị ka i kwuru.”+ M wee kpọọ ndị nchụàjà ma mee ka ha ṅụọ iyi ime ihe a e kwuru.+ 13 M fechapụrụ ihe dị n’obi uwe m wee sị: “Ka ezi Chineke si otú a si n’ụlọ nakwa n’ihe onwunwe nke onye ọ bụla na-emeghị okwu a fechapụ ya; ka o sikwa otú a fechapụ ya wee mee ka ọ tọgbọrọ nkịtị.” Ọgbakọ ahụ dum wee sị: “Amen!”+ Ha wee malite ito Jehova.+ Mmadụ niile wee mee ihe a e kwuru.+ 14 Ihe ọzọ bụ: Malite n’ụbọchị o mere ka m bụrụ gọvanọ+ ha n’ala Juda, malite n’afọ nke iri abụọ+ ruo n’afọ nke iri atọ na abụọ+ nke ọchịchị Atazaksis+ bụ́ eze, afọ iri na abụọ, mụ onwe m na ụmụnne m erighị nri gọvanọ kwesịrị ịdị na-eri.+ 15 Ma ndị bụ́ gọvanọ tupu mụ onwe m boro ndị anyị ibu arọ, ha nọkwa na-anara ha shekel ọlaọcha iri anọ maka nri na mmanya kwa ụbọchị. Ndị na-ejere ha ozi chịkwara ndị anyị ọchịchị nchịgbu.+ Ma mụ onwe m emeghị otú ahụ+ n’ihi egwu Chineke.+ 16 M sokwa wuo mgbidi a,+ anyị enwetaghịkwa ala ọ bụla;+ ndị niile na-ejere m ozi zukọtakwara n’ebe ahụ maka ọrụ ahụ. 17 Ndị Juu na ndị osote onye na-achị achị, ndị ikom dị otu narị na iri ise, na ndị na-esi ná mba ndị ọzọ gbara anyị gburugburu abịakwute anyị na-anọ na tebụl mụ.+ 18 A bịa n’ihe a na-akwadebe kwa ụbọchị, a na-akwadebere m otu oké ehi, atụrụ isii na nnụnụ ndị kasị mma, a na-ebutekwara m ụdị mmanya+ niile n’ụba otu ugboro n’ime ụbọchị iri ọ bụla. Ma tinyere ihe ndị a, asịghị m ka e nye m nri gọvanọ kwesịrị ịdị na-eri, n’ihi na ozi a chọrọ ka ndị a na-eje dị arọ. 19 Chineke m, biko, cheta m+ ka i meere m ihe ọma+ n’ihi ihe niile m meere ndị a.+